Wikipedia:Ny tsy tokony ho wikipedia - Wikipedia
1 Ny tsy tokony ho wikipedia
1.1 Ny wikipedia dia tsy taratasy firaketana
1.1.1 Tsy voafetra ny toerana
1.2 Ny wikipedia dia tsy Rakibolana (diksionera)
1.3 Ny wikipedia dia tsy famoahana hevitra noforonina samirery ka eto no hamoahana azy voalohany
1.4 Ny wikipedia dia tsy fanaovana dokam-barotra na propagandy
1.5 Ny wikipedia dia tsy toerana fitehirizana na fanangonana sary na media
1.6 Ny wikipedia dia tsy manavaka ny fampahalalàna (informations) voaangona
1.7 Ny wikipedia tsy voafondro
Ny tsy tokony ho wikipediaHanova
Ny wikipedia dia tsy taratasy firaketanaHanova
Na dia hoe raki-pahalalàna aza Wikipedia, tsy manana ny faneren'ny taratasy firaketana sy ny firaketana an-tranonkala izy. Ny halalin'ny lahatsoratra eto amin'ny wikipedia dia tsiefa, ara-teôria. Ny Wikipedia dia mivoatra araka ny hafainganana, ny hangeza ny toerana itehirizina ny lahatsoratra ary ny bande passante ny mpikajy ; na dia hoe misy farana aza amin'izy ireo, mety tsy ho tratra mihintsy izy ireo.
Niteny i Jimmy Wales hoe tsy ho lasa forum iresahana ihany ny wikipedia ; na dia izany, hafa amin'ny firaketana taratasy ny wikipedia, izay ny anisan'ny lafitsarany.
Tsy voafetra ny toeranaHanova
Ny mahasamihafan'i Wikipedia amin'ny firaketana taratasy dia tsy ferana ny halava ny lahatsoratra soratana. Tsy maninona mihintsy raha hoe 100 pejy ny halava ny lahatsoratra soratanao, izay zato pejy izay dia efa mahavita boky izay. Afohizina izao izay lahatsoratra izay raha manoratra amin'ny firaketana taratasy ianao. Izay ny anton'ny firaketana anglisy 'Encyclopaedia Britannica tsy dia manome information betsaka, satria ferana ny halava ny takelaka.
Kely dia kely ny toerana alain'ny soratra. Raha misy litera 7 isaky ny teny, raha 250 000 Ar. ny 1 000 Go, mahazaka teny 142 lavitrisa ny disika iray, 10 Mo ny lanja ny wikipedia malagasy eo amin'ny rindrankajy, 8,20 Ar. (40,96 F) monja ny vola lany amin'ny wikipedia malagasy amin'ny lafin'ny disika. Araka ny tenenin'i Jimmy Wales : Tsy lafo ny toerana.
Ny wikipedia dia tsy Rakibolana (diksionera)Hanova
Tsy rakibolana ny Wikipedia ; raha tsy ensiklopedika ny voambolana iray, dia tsy tokony hanaovana lahatsoratra ato ; ary raha misy voambolana maro no miresaka momba ny fotokevitra ensiklopedika iray, dia lahatsoratra iray ihany no tokony hisy ato, fa ny lohateny hafa kosa dia tokony ho tandindon'ny pejy iray fotsiny ihany, amin'ny alàlan'ny redirections.
Ny fampidirana ao amin'ny lahatsoratra iray dia tokony hamariparitra ny ambangovangon'ilay lahatsoratra sy ny tantarany fa tsy ho fandrasàna teny sy etimôlôjia ary ny fampiasana ny ilay lohateny. Ny pejin'ny teny mitovy feo dia tokony hampiasaina hampisehoana ireo lahatsoratra manana lohateny mety hitovitovy fanononana na tsipelina nefa manana dikany samihafa. Ohatra, ny lahatsoratra Madagasikara firenena, Madagasikara (zavamaniry), ary Madagascar (sarimihetsika) dia tokony hanana pejy ahitana ny mitovitovy fanononana na fanoratana aminy, mba hahafahan'ny mpamaky mahita moramora kokoa ny lahatsoratra tadiaviny.
Tsy midika akory izany fa hoe ny etimôlôjia, ny fandrasana teny, na zavatra hafa efa hita anatin'ny rakibolana dia hors-sujet ato anatin'ny Wikipedia, ny marina kokoa dia hoe tsy atao laharampahamehana na votoatin'ny lahatsoratra izy ireny.
Azonao jerena ny Wikibolana (rakibolana wiki), tetikasa hafa novolavolain'ny Wikimedia Foundation
Ny wikipedia dia tsy famoahana hevitra noforonina samirery ka eto no hamoahana azy voalohanyHanova
Ao amin'ny fitsipika momban'ny lahatsoratran'i Wikipedia miteny hoe tsy toerana famoahana hevitra noforonina ny wikipedia.
Ny asa noforonina dia fitadiavana tsy navoaka teny ivelan'i Wikipedia.
Ny wikipedia dia tsy fanaovana dokam-barotra na propagandyHanova
Ny wikipedia dia tsy toerana fitehirizana na fanangonana sary na mediaHanova
Ny wikipedia dia tsy manavaka ny fampahalalàna (informations) voaangonaHanova
Ny wikipedia tsy voafondroHanova
Eto amin'ny wikipedia, ny teny sy ny sary mety hitan'ny mpamaky hoe mahatsiravina. Ampiasaina ny zava-mahatsiravina rehefa tsy mampianatra ny lahatsoratra raha hadino izany teny na sary mahatsiravina izany. Rehefa manoratra, dia araho fotsiny ny fitsipika momba ny lahatsoratra, ary raha hampatahotra ny mpamaky ny tanjony, dia esory avy hatrany ilay izy raha tsy ilaina ao amin'ny lahatsoratra soratana. Ao amin'ny tanjon'ny wikipedia ny manana fampahalalàna mombana zava-mahatsiravina ; fa tsy amin'ny tanjon'ny wikipedia no mandrangitra azy.
Amin'ny lahatsoratra, ny teny ratsy dia mety soratana na tsia ; rarana ny asterisika na soratra hafa manitrika azy. Ohatra, rarana amin'ny lahatsoratraa no manova tay amin'amany => t** ****'***** ; na izy soratana na tsia. Raha ilaina, asivo "[teny voafondro]" rehefa misy teny ratsy ao amin'ilay citation, na "[sic]" .
Ity pejy ity dia mampiseho antsipirihany momba ny fototra iray amin'ny fototra dimy.
Miasa amin'ny wikipedia rehetra ny fototra dimy. Izy ireo no mandeha alohan'ny fitsipika hafa sy ny fepetra apetraky ny fikambanana.
Na dia azo atao aza ny manova ity pejy ityn tsara ampiasaina ny pejin-dresaka na ny Bistro aloha ny manova.
↑ ((fr)) http://www.choixpc.com/disquedu.htm
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Ny_tsy_tokony_ho_wikipedia&oldid=601102"
Dernière modification le 8 Martsa 2013, à 10:53
Voaova farany tamin'ny 8 Martsa 2013 amin'ny 10:53 ity pejy ity.